🥇 ▷ Google ayaa ka saartay “CamScanner” bakhaarradeeda sababo la xiriira jir-dilis ✅
Google ayaa ka saartay “CamScanner” bakhaarradeeda sababo la xiriira jir-dilis
CamScanner ayaa laga saaray Google Play Store kadib markii la ogaaday jiritaanka fangas. Shirkadda amniga ee Kaspersky Labs ayaa ogaatay koodh xaasidnimo ah oo ku jira ogeysiisyadii ku jiray nooca dhowaan software-ka Android
Sida barnaamijyadooda kale oo badan, CamScanner waa barnaamij bilaash ah oo lagu soo dejiyo xayeysiis. Waxaa loo tixgeliyey inay tahay mid sharci ah oo aamin ah, laakiin cilmi-baarayaashu Kaspersky Labs waxay ogaadeen in noocyadii u dambeeyay ay wataan aalad loo yaqaan Trojan Dropper, oo ah fuleynno rakibaya digniino iyo digniino xun.
Nooca ‘CamScanner’ ee loogu talagalay iPhone ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay qalalaase, iyo soosaaraha barnaamijka ayaa sheegay inay cusbooneysiyeen nooca cusub iyada oo aan lahayn lambarka anshax darrada ah.
“Xirmooyinka xayasiiska ee lagu dhawaaqayo waxaa bixiyay shirkad dibadeed oo la yiraahdo AdHub waxaana lagu soo waramay inay kujiraan mowjad xaasidnimo ah oo abuuraya ogeysiisyo xayeysiis ah oo aan laga fiirsan. Waxaan tallaabo ka qaadnay AdHub oo waxaan dhowaan soo saari doonaa nooc cusub,” ayuu CamScanner ku caddeeyay hadal uu soo saaray.
Ka dib warbixintii Kaspersky, Google ayaa ka qaadatay shirkadda ‘CamScanner’ Play Store for Android, oo ah dalab caan ah oo laga soo dejiyay wax ka badan 100 milyan jeer ilaa maanta.
“Dukaamada rasmiga ah sida Play Store badanaa waxaa loo tixgeliyaa inay bad qabaan. Laakiin kiiskani wuxuu ina tusayaa in talaabooyinka laga yaabo inaysan ku filnayn, xitaa shirkadaha wax ka dejiya shirkada cabirka Google,” ayay yiraahdeen baarayaasha shirkada amniga ee IT.